Xiaomi Redmi Note 10၊ Redmi Note 4X နှင့် Redmi Note4Pro တို့တွင် MIUI6Global Stable ကို Install လုပ်ပါ။ Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | NOTICIAS, လဲ tutorial, Xiaomi က
၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် Xiaomi ၏နောက်ဆုံးပေါ်စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြစ်သော MIUI 10, ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည် သင့်ရဲ့ပစ္စည်းများစွာကို။ ဤရွေ့ကားလုပ်ရပ်များသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများနှင့် terminal ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆိုင်းငံ့ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ကခိုင်မာစေ; ကံမကောင်းစွာပဲငါတို့အားလုံးကိုမပြောနိုင်တဲ့အရာ။
ဤအချိန်တွင်စမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးခုသည်တည်ငြိမ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်မှုကိုလက်ခံရရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်အခြားအရာများဖြစ်သည် ပျော်ရွှင်ဖွယ် Redmi Note 4၊ Redmi မှတ်ချက် 4X နှင့် Redmi Note6Pro ကို. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Redmi Note 10၊ Redmi Note 4X နှင့် Redmi Note4Pro တို့တွင် MIUI6Global Stable ကို Install လုပ်ပါ
Xiaomi က Redmi6Pro ကိုမှတ်ချက်
ROM များကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်သွားရမယ် configuration ကို > ဖုန်းအကြောင်း > စနစ်မွမ်းမံမှု > update ကိုရွေးချယ်ပါ ထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာ MIUI 10 Global Stable ROM ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းများ၌တပ်ဆင်ရန် download file ကိုရွေးချယ်ပါ။
Redmi Note6Pro ကိုစျေးကွက်အနည်းငယ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်သို့သော်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည် Android 10 Oreo ကို အခြေခံ၍ MIUI 8.1 Global Stable ROM ကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီမှာ ဒီမော်ဒယ်အတွက် update ကို download လုပ်ရန် link ကို.
ငါတို့ကောင်းစွာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အမှတ်တံဆိပ်သည် Redmi Note 10 နှင့် Redmi Note 4X ဖုန်းများအတွက် MIUI4Global Stable ကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အသစ် update ကိုနိုင်ပါတယ် flash ပြီးနောက် ဒီ link ကနေ download လုပ်ပါ။ မှတ်မိဖို့လိုသည်မှာ၎င်းသည် Oreo ဗားရှင်းမဟုတ်ဘဲ Android Nougat ကိုအခြေခံသည်။
Redmi Note4နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကို operating system ဖြင့်စတင်ခဲ့သည် MIUI 6.0 မှ Android 8 Marshmallow။ အိန္ဒိယတွင်ဤပုံစံကိုအသုံးပြုသူများသည် MIUI 10 Global Stable version ကို OTA update မှတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိပြီး Redmi Note6Pro နှင့် Redmi Note 4X သုံးစွဲသူများသည် MIUI 10 Global Stable OTA update ကိုမရရှိသေးပါ။ ဒါတောင်မှရရှိနိုင်ရင်တောင်အဲဒါကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ် configuration ကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဆင့်တွေကိုအလားတူနည်းလမ်းနဲ့ install လုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi Redmi Note 10၊ Redmi Note 4X နှင့် Redmi Note4Pro တို့တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်သော MIUI6ဗားရှင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Facebook Messenger သည်မက်ဆေ့ခ်ျများဖျက်ခြင်းကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်